Saffron monkfish na prawns | Bezzia
Saffron monkfish na prawns
Maria onyekwere | 09/01/2022 10:00 | Gaa
Taa, anyị na-agba gị ume na Bezzia ịkwadebe a dị mfe azụ uzommeputa na zuru okè maka ememe n'ọdịnihu: Saffron monkfish na prawns. Ntụziaka nke ị nwekwara ike ịgbakwunye clams ma ọ bụ mọsel ka casserole gbasaa karịa.
El saffron monkfish na prawns Ọ bụghị naanị uzommeputa dị mfe, kamakwa ngwa ngwa, ngwa ngwa! Ọ gaghị ewe gị ihe karịrị minit 20 iji kwadebe ya, nke ga-enye gị ohere ịṅa ntị n'ihe ndị ọzọ n'ụtụtụ. Ị maliteghị ịmasị ya?
Ị nwere ike ime nhazi a na monkfish mana yana ndị ọzọ azụ dị ka hake, naanị ịhazigharị oge. Na Bezzia anyị na-ahụ na ọ bụ ezigbo nhọrọ mgbe anyị nwere ndị ọbịa. N'ezie, mgbe anyị chọpụtara na anyị ga-ese foto iji gosi usoro nhazi, ndị ọbịa anyị eriworị ọkara nke ya.
2 Nzọụkwụ site na nkwụsị
8 mọnkfish dị nro
20 prawn, bee
2 tablespoons nke extra Virgin olive mmanụ
2 garlic cloves, mepụtara
1 tablespoon ntụ ọka
1/2 iko mmanya
Ole na ole na eri nke saffron
Iko 2 nke efere azụ (ị nwere ike iji isi monkfish na shells prawn mee otu)
Nzọụkwụ site na nkwụsị
Kpoo mmanu na obere efere na sauté galiki otu oge.
Mgbe ọ malitere ịcha agba, tinye ntụ ọka na esi nri maka nkeji mgbe ị na-agwakọta.
Emechaa tinye mmanya ọcha ma hapụ ya ka ọ belata nkeji ole na ole.
Mgbe ah wụsa efere azụ na saffron. Mix na esi nri maka nkeji ole na ole.
Ya mere, tinye fillet mọnk ezi agwa na akụkụ akpụkpọ ahụ elu ma sie nri maka nkeji anọ, na-akpali casserole site n'oge ruo n'oge.
Mgbe nkeji anọ gachara, tụgharịa rapa nro na tinye prawns. Esi nri ya niile maka nkeji 2-3 ọzọ, na-ebugharị casserole dị ka a ga-asị na ị na-akwadebe cod al pil pil.
Gbanyụọ ọkụ ma jiri ahịhịa na-ekpo ọkụ jee ozi saffron snuff.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Gaa » Saffron monkfish na prawns
Igodo nke ime ka mmekọrịta dị omimi
Pọdkastị 4 nwetụrụla ewu ewu na 2021, chọpụta ha!